Abantu zihlale unesithakazelo ngekusasa labo, ayesekulungele epha phi mali imizuzwana okungenani ambalwa ukubheka izinto ezizokwenzeka. Labo abalidlayo amakhono enjalo, ebizwa ngokuthi nina baboni bemibono. Zaba khona ngazo zonke izikhathi futhi isetshenziselwe ukuthola ulwazi ngendlela ehluke ngokuphelele izindlela. Bangaki balaba bantu baye emlandweni akwaziwa ngoba ezisekhona amagama bemibono ambalwa. Bangobani - the ababikezeli edume kunazo zonke emhlabeni?
oyisangoma ubuchwepheshe: Kwenzeka kanjani?
Ososayensi base yekhulu nesishiyagalolunye uzama ukuthola indlela abanye abantu uphathe lokubikezela ikusasa, ngakho incazelo eningiliziwe ke. Ngeshwa, kulezi zinsuku oyisangoma indlela akakasitsheli. Nakuba zikhona esinikezwa zithi uyakwazi wonke umuntu, ngaphandle kokukhetha. Vele iningi akazi ukuthi ukuyisebenzisa, kodwa ezingavamile abathandekayo lucky ephethwe ukuvusa isipho sabo futhi ulisebenzise ukuze kuzuze abanye.
Ngokumangalisayo, zonke umboni isebenzisa izindlela ezihlukahlukene ukuthi uyivumele ukungena esikhathini esizayo. Abanye abantu bayawa le njongo yisiyezi, kanye nabanye bezwa amazwi. Kukhona esinikezwa isigaba ezisebenzisa izindlela elisizayo, ezifana amabalazwe, ikhofi ngezizathu noma zinhlayiya ezahlukene. izibikezelo ezinjalo zivame kudidaniswe inhlanhla, ngakho ngokuya ukutadisha engaziwa kukhona kwencazelo imihlola. Lezi ikakhulukazi ukufaka abantu bayakwazi ukukhuluma ngezenzakalo esizayo ngaphandle nezinsiza. Ngakho-ke, siyobe uholwe yencazelo beyofuna lowo ongase Sinika isihloko "le imihlola edume kunazo zonke."
zindlela Akwaziwa: bangobani?
Emlandweni impucuko womuntu ebonakala ngokuphindiwe abantu possessed isipho enamandla wahlola imihlola, bakwazi ukubheka ekhulwini phambili. Ngakho kunzima ngempela ukuthola ukuthi ngubani iyona imihlola edume kunazo zonke. Phela, iziprofetho eziningi kakade woza bemibono kweqiniso, kodwa ngenkathi ezinye namanje kufanelana. Futhi cishe wonke umuntu, senze ukuqagela self-yokugcwalisa, uhlangabezana yokuhlonipha uqala ngonanzelelo lo namazwi ababoni.
Muva nje, isihloko esinikezwa wakhulela owaziwa ukuzijabulisa show "100 kuya ku-1". I isangoma edume kunazo owayemuhle wayebizwa ngokuthi abaseRussia, okuyinto nemiyalezo okwaxoxwa emigwaqweni eMoscow. Umbono we izakhamuzi kwaba ngazwilinye kakhulu, babiza amagama eziyisithupha. Bezulu eyaziwa eRussia, imi kanje:
La magama aziwa cishe yisiphi isakhamuzi Russian. Ngayinye amagama abantu abakulezo townsfolk inkomba. Kodwa ingabe kunjalo ngempela? Yini ngempela esiyaziyo lezi esinikezwa?
Bezulu zaziwa kubo bonke: Wang
Lona wesifazane Sekuyisikhathi eside njengelinye lamazwe izibalo edume kunazo yekhulu lamashumi amabili. Wazalelwa 1911, intombazane okucabangela imiphumela yesikhathi eside kakhulu futhi uyakwazi ukwenza eziningi izibikezelo abantu abavamile kanye nezinhloko bohulumende bemave ezahlukene. Emkhayeni, umboni esizayo awuzange kulindeleke ukuthi Intombazane ngakho onesiphiwo. Yakhula yaba izinyane evamile ngokuphelele kuze engu-nambili, lapho, phakathi iSiphepho Wakhohlwa wakhe. Phakathi kwempi yezwe yesibili endaweni lapho ayehlala khona Wang, ukhuluma ngani amakhono wakhe ongaphezu kovamile. Ngokuhamba kwesikhathi, inkazimulo ukusabalala clairvoyant emhlabeni wonke, kuba nalokho okugcizelelwe efanayo wathatha abantu abavamile futhi enamandla.
Wona Vanga wathi ebona ikusasa njengoba ewindini lapho ukudlala ngalo lonke umlando wokuphila womuntu. Linikeza izwi ekhanda lami lithi kwenzekani, ikakhulukazi abahlala yokuthi kubalulekile ukudalula oweza usizo Vanga.
Phrofethi wabikezela Lapho kunqotshwa uHitler, kokufa kukaStalin futhi ushintsho kohulumeni emazweni ahlukahlukene. Okuningi kwalokho clairvoyant wathi, asikafiki kweqiniso. Ngaphambi kokufa kwakhe, ethola isikhathi ukwenza izibikezelo kuze iminyaka ayizinkulungwane ezinhlanu. Kwakuphakathi nalesi sikhathi, ngokuvumelana Vanga, siphele futhi kuyoba khona ngokufa kwaso sonke isintu. Ngakho kungakhathaliseki ukuthi akwaziwa, kodwa kuze kube manje konke izibikezelo zakhe ngizile impahla kweqiniso.
ZikaNostradamus: I katranov Mystery
Famous isangoma Mishel zikaNostradamus kuyinto sibalo ongaqondakali kakhulu esikhathini esidlule. Yena eyabekwa izibikezelo zabo futhi wazibhala ngesimo izinkondlo - katranov. Phakathi namakhulu eminyaka esidlulile kusukela ukufa umboni, Katrana yakhe ngokuphindiwe sezithotshiselwe phansi emagama. umbhali ngamunye unikeza inguqulo entsha ngokuphelele kwalesi sibikezelo. Kukholakala ukuthi zikaNostradamus akasenzanga Ungumboni, kodwa futhi ngezinkanyezi, Alchemist imbongi. Izazi-mlando eziningi baphikisa ngokuthi ngekhulu leshumi nesithupha, lapho i-nokuncane magic bathole iso Zamacala Ezihlubuki zangeNkathi Ephakathi, kodwa kwavele kwaba yize umsebenzi kuyingozi kakhulu. Kwakubonakala umbango futhi umlilo. Yingakho zikaNostradamus eyabekwa ngokucophelela izibikezelo zabo, bazenza zaba esilufifi ngaphezulu.
Abanye abacwaningi bakholelwa iziprofetho ngezinkanyezi omkhulu, ukuthi wabhala Katrana yakhe esekelwe imibhalo lomunye ohlola imihlola, owaphila ekhulwini weshumi nane. Igama lakhe kwakungu-Rene uNero, futhi abaningi ayephila nabo bembiza black spider. Naphezu ukufana okukhona kule mibhalo, kunzima ukusho ukuthi zikaNostradamus wazikopisha. Ngaphezu kwalokho, wakwazi ukwenza izibikezelo kuze kube 2240, lapho isintu (ngokombono wakhe) ukuba indlela eduze lokufa kwakhe. Kodwa ngezinkanyezi amangalelwe ukuthi usuku lwembubhiso kuzokwenzeka ngempela. Wayekholelwa ukuthi isintu angase aphunyuke aqhubeke ephila kahle bese ziqala inkathi entsha yokuchuma nokuthula emhlabeni.
Pavel Globa: ngezinkanyezi yesimanjemanje
Cishe noma yisiphi isakhamuzi Russian uyazi igama pavla Globy. Wazalwa phakathi nekhulu leminyaka eledlule futhi okwamanje kuyinto sibalo ludale ezweni elingaziwa. Iqiniso ukuthi kungokwalabo esigabeni sabantu amela umsuka ukubhula ngezinkanyezi yesimanje Soviet. Wakwazi ukuhlela luhlobo yabo, ngisho olwenziwa izinhlelo eziningana ithelevishini.
Ngeshwa, abaningi izibikezelo Globa kukhona zingagcwaliseki. Ngokusho kochwepheshe, kukhona amaphesenti angaphezu kuka amahlanu.
Wolf ukuzixakekisa: yetinsita
Life and nomsebenzi Wolf ukuzixakekisa lizungezwe aura imfihlakalo nezimfumbe. Abanye bathi ilapho lapho kuye genius ingqondo umfundi futhi owelapha ngokulutha ingqondo, kuyilapho abanye nje umculi abanamakhono futhi isazi sokusebenza kwengqondo. Kuze kube manje, le ncazelo ngqo ithalente lakhe alikho, ngoba eziningi amagama usaphatha obuhlolwe enemininingwane futhi ngokucophelela awazange baqinisekisa.
Abantu besikhathi Abaningi owelapha ngokulutha ingqondo uthi ayelichithe ukunandisa kwakhe ekhaya umfutho high ngokomzwelo ukuthi kuvimbe izilaleli elivunyelwa ukuhlola izenzakalo eziqhubekayo kanye nekhono umdwebi sika.
Juna - Inyanga kanye ngezinkanyezi
Naphezu kweqiniso lokuthi abantu baseRussia cabanga Joon umbhuli, yena ubheka yena abelaphi. Lokho kwaba isipho sakhe esiyinhloko ukuthi owesifazane balidumisa kulo lonke elaseSoviet Union. ikhono Juna ukuba wafunda sina futhi ihlolwe ngu ochwepheshe Soviet. Isangoma asigcinanga ngokumnika umuthi Customer ungumuntu wokuqala kuleli zwe ababekholwa isipho yakhe futhi wakuthola enamandla kakhulu.
Ngaphezu ukuphulukisa, Jung emsebenzini lokudala, wathi akutholayo amandla avela emkhathini futhi kusukela emandleni aphakeme. owesifazane Engaqondakali washona ngo 2015 eneminyaka engu-iminyaka emashumi mathandathu anamihlanu.
Yuri Longo: umenzi wemilingo nangokuthi illusionist
Yuri Longo, futhi, kungaba uyibize ngokuthi indoda nge amandla ngemilingo. Wazalwa phakathi nekhulu leminyaka eledlule. Longo ngozwelo kakhulu ukubona izitayela ezintsha obonakaliswe isithakazelo ezintweni zonke ezingaqondakali. Wachitha lokuqala Soviet imidlalo ye-TV, lapho wazama okuvusa abafileyo futhi uphulukise abagulayo. ochwepheshe Modern bathi Yuri Longo kungenziwa ashiwo bakhohlisi ngubani benza izizumbulu zemali ukukopela abantu abavamile.
Ngokumangalisayo, uma sihlaziya imisebenzi labo ngesikhathi esisodwa amangalelwe isihloko Izanusi nababhuli, phakathi kwabo impela eningi lamasela futhi bakhohlisi. Kodwa, ngaphandle kwalokhu, kwakukhona bemibono yangempela ukubikezela ukuthi kuze kube manje ososayensi shí esimweni badideke futhi ukushaqeka.
Edgar Keysi - "ukulala" umboni
A inkomba owaziwa Ngokuzayo American Edgar Keysi khona ubuntu kokuvamile oqaliswe lezi esinikezwa, onikezwe ukufinyelela kunoma yikuphi ibanga kanye nesikhathi. Indoda yayiphethe ikhono lokubona izinto kusengaphambili kuyamangalisa, futhi iningi izibikezelo zakhe kakade ziye zagcwaliseka.
Casey wazalwa ngasekupheleni kwekhulu nesishiyagalolunye umndeni umlimi elula American. Ngezinye engu umfundi uvele amakhono Paranormal. Wayengeke isifundo, futhi uyise ofuthelene hit indlebe womfana. Falling, Casey ngizwa izwi wamyala ukulala. Kamuva umfana wabeka ukulala kwethi kwathi ingakapheli nemizuzu engu wayazi konke okwakudingeka ukuze kwakhiwe leli sifundo.
Kungenxa ikhono ukuthola ulwazi ubuthongo trance-like, Cayce ngokuthi "silele" umprofethi. Empilweni yakhe yonke wenza okuningi izibikezelo mayelana isiphetho abantu, ukukhuluma mayelana nemiphakathi yakudala nezinhlekelele esikhathini esizayo. A lot of ukunakwa e izibikezelo zabo Casey wanika Russia nekusasa layo. Sathi emva uchungechunge izinhlekelele ukuthi cishe wabhubhisa Melika, eYurophu nase-izingxenye Japan, sithemba ukuba izwe Russian. Lokho kuyoba ngivuselele impucuko womuntu, awulethe isigaba esisha ukuthuthukiswa.
ababoni yesikhathi esidlule
I ababikezeli edume kakhulu emhlabeni ashiye uphawu lwawo emlandweni, ukuvela kokuthi bonke ubudala. Ngo zamaGreki, endaweni ekhethekile kuhlala umprofethikazi Cassandra, okuyinto namanje kokuba mpikiswano yizazimlando izazi. Kucatshangwa eyindodakazi yeNkosi Priam futhi Troy waba alibikezele ukufa okungena ngayo amahhashi omkhulu. Ngo imithombo ngesiGreki mayelana nemakhono Cassandra eqoqwe ulwazi ngempela eziphikisa.
Ngokwesibonelo, uHomer kwemukela intombazane yayo enhle ngokuphawulekayo, ayigxilile isipho esithile. Aeschylus kule nhlekelele "Agamemnon 'okukhulunywa ngayo ikhono lokubikezela intombazane ukuthi wayethole kusukela Apollo. Ukukhohlisa unkulunkulu, yena wajeziswa kwabangakholwayo isipho sakhe. Lokhu kwagcina kuholele ekubeni ekwindla ka Troy.
Kamuva, waba umka-Agamemnon, wamzalela amadodana amabili. Izazi-mlando zithi wayevame ufakaze isiphetho zabanye abantu, futhi wabikezela ngisho ukufa kwakhe.
zindlela Akwaziwa zomhlaba: UMariya Lenorman
Mayelana nalesi waseFrance njalo edume. Wazalelwa ugly kakhulu, ngaphezu kwalokho, kwaba nezinyonga. abazali Ngisho wentombazane bamangala kungamboza ububi bakhe, futhi iminyaka emihlanu ngenjabulo walinika bakhulela ephathelene nokuphatha izindela. Kwakuphakathi nalesi sikhathi lapho isikhathi ingane okwaqala amandla eziyinqaba, abazali okwesabisayo.
Ngu eyishumi nesithupha, Mary wabuya emhlanjini. Wayithola imfundo kuhle, kanti ukutadisha izincwadi ku ukubhula esoteric wamnika okuningi ulwazi olusha ukuthi lusebenza kalula. Esijana eParis, lapho waya beyofuna ukuphila okungcono, waba nesimangaliso zonke comers futhi ngokushesha ayedumile engakaze ibonwe, njengoba wonke amagama wakhe ziyafezeka njalo. Noma yimuphi inkomba eyaziwayo namuhla angase awufise isipho Lenormand. Ayengakwenza cishe konke - kwaba amakhadi atholakalayo, clairvoyance, ukubhula ngokufunda intende nezinye izindlela eziningi bokubikezela.
Ngoba kufike umuntu mumbe izibikezelo edume kunazo Marie Lenormand uyalandisa kokufa Queen Marie Antoinette, ngubani, phakathi French Revolution kuze kube izikafula. Amakhasimende babe abaholi izinyonga wemibono ka Revolution, netikhulu ngisho Napoleon yena. Watshela owesifazane mayelana kuyanda esizayo futhi twilight esihlazisayo sezitha ukuphila kwakhe. Yilokhu kwaholela eqinisweni ukuthi waba umbusi, uNapoleon wazama ukubulala ummemezeli eshisiwe.
Kukhona ubufakazi obungokomlando ukufakazisa ukuthi Marii Lenorman wafika Russian uMbusi u-Alexander I Decembrists esizayo yaphela umsebenzi wakhe esigodweni. Omunye wesifazane aliveza amakhadi phezu futhi wabona ukufa kwakhe elafika kuye, sekuyiminyaka eyishumi nane ncamashi ngendlela labikezela.
Kunzima ukunquma okungukufa inkomba owaziwa best ngoba kwenkathi ngayinye kudala namaqhawe alo nabaprofethi. Lokhu kusho ukuthi maduzane nje abantu bayozwa mayelana bemibono entsha asebethole babe edume kakhulu kwekhulu lamashumi amabili nanye.
Cream "muslin": zokupheka
Ukulungiselela ukhilimu we-mastic yekhekhe